टी-72: विशेषताहरु र फोटो। टी-72 "यूराल" - मुख्य युद्धमा ट्यांक सोभियत संघ
पनि टी-62 ट्यांक सिरियल उत्पादन अघि, मुख्य डिजाइनर एल एन Kartsevym यूराल ढुवानी बोट यसलाई नयाँ इन्जिन, थप शक्तिशाली र अधिक अगाडी-देख सेट गरेर मोडेल सुधार गर्न प्रस्तावित थियो चेसिस। यो टी-72 ट्यांक रूपमा देखा पर्नुभयो। वाहन विशेषताहरु यो रूपमा एक ठूलो Armored वाहन अवलोकन।
1961 को गर्मी मा ट्यांक को पहिलो दुई प्रतिलिपिहरू निर्माण थिए, र तिनीहरूले एक त्वरित मोड मा परीक्षण थिए - त्यसपछि साइट मा पहिलो बोट। वस्तु आधुनिक बनाउनु भिन्नता, तर यसको सबै लाभ बावजुद मा, बोट नयाँ ट्यांक को उत्पादन को लागि आधिकारिक अनुमति प्राप्त छैन। वर्ष वर्ष पछि, केही परिवर्तन मोडेल मा गरिएको छ:
कमान्डर, गनर र चालक - पहिले तीन शामिल जो टी-72 ट्यांक, को चालक दल लाग्यो थियो।
ट्यांक एक बन्दूक autoloaders र हतियार सुरक्षा योजना आधारित श्रीलंका इस्पात संग सुसज्जित थियो।
Chassis मोडेल कुनै 40 भन्दा बढी टन वजन योजना बनाए।
तर यी परिवर्तनहरू केवल दुई पक्ष gearboxes बाँकी थिए, छैन लिइएको छ।
सुविधाहरू ट्यांक लेआउट
टी-72 - जुदाई शक्ति को कडी मा स्थित छ जब ट्यांक, शास्त्रीय निर्माण विशेषता। व्यवस्थापन यहाँ, वाहन को अगाडी भाग मा केन्द्रित छ इन्धन ट्यांक, ड्राइभर एक ट्यांक-रैक प्लेट नियन्त्रण उपकरणहरू विद्युत उपकरण अवस्थित छ।
शाखा नियन्त्रण ट्यांक टी-72 नियन्त्रण जो यांत्रिक सीट सामेल छन्। को चालक सीट माथि त्यहाँ प्वाल छ। यो मेरो हतियार प्लेट कि अवस्था अनुगमन गर्न अनुमति दिन्छ उपकरण स्थापित। ट्यांक तल मा सिट को judicious डिजाइन भनेर सवारी चलाउँदा ड्राइभर बस्छन।
ट्यांक मा चालक दल खण्ड विशेष विभाजन मा शक्ति पैक अलग छ जो hull र turret, को बीचमा बाँकी छ। राम्रो विचार-बाहिर डिजाइन कार्यालय देखि कार्यालय गर्न चालक दल सदस्य को सजिलो आन्दोलन गर्न अनुमति दिन्छ। सुविधा र Ergonomics - मुख्य मतभेद, जो टी-72 ट्यांक को घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ। एक लडाई पोत तिनलाई को विशेषता पनि प्रभावशाली छ:
ट्यांक एक smoothbore बन्दूक टावर 125 मिमी, को चार्ज मिसिन र आगो नियन्त्रण उपकरण संग सुसज्जित छ।
बन्दूक संग सुसज्जित छ दाँया एक कमान्डर गरेको र गनर बायाँ बस्छन।
सही पक्षमा बन्दूक मा त्यहाँ एक pkt मेशिन गन छ, र यो spacers आधार पाइप-rangefinder दृष्टि मा खण्डमा माथि।
कार्यस्थल कमान्डर आकर्षक उपकरण: यो बिजुली मेशिन गन डाट, ट्यांक ठाडो निर्देशन, रेडियो, एक विशेष उपकरण, बाहिर सकेट अवतरण, धरहरालाई को कमान्डर को प्रोपेलर ड्राइभ जोडिएको छ जो मार्फत हुन्छन्।
धरहरालाई को कमान्डर कभर प्लेट torsion पट्टी ढाकिएको छ।
कमान्डर गरेको cupola दुई अवलोकन उपकरणहरू TNP-160 संग सुसज्जित र उपकरण TKN-3 दिएको आज्ञा पालन गरिएको छ।
को झगडा खण्ड पनि ट्यांक को प्रयोग मा सजिलो सुनिश्चित कि साधन र संयन्त्र संग सुसज्जित छ।
को पिछाडी भाग एक अलग शक्ति छ। इन्जिन ट्यांक टी-72 पोर्ट पक्षमा स्थित छ, र तिनीहरूलाई बीच मोटर ठंडा प्रणाली, तेल फिल्टर, को वृद्धि ट्यांक वाल्व लागि विभाजन छ। सही पक्षमा हावा शुद्ध माउन्ट। आवास एक पाना फिड, wherein को ठंडा सिस्टम स्थित छ छ। यो पनि अतिरिक्त अलग शक्ति र मुख्य तेल ट्यांक, जो इन्जिन स्नेहन योगदान संग सुसज्जित छ। शक्ति कार्यालय ढक्कन बन्द। खपत इन्धन ट्यांक टी-72 निम्नानुसार 100 मी:
जब जमीन ड्राइभिङ - एल 260-450;
240 एल - छापिएको सडक मा।
एक लोकप्रिय सोभियत ट्यांक को - टी-72 ट्यांक। शरीर को सुविधाहरू वर्णन गर्न भने युद्धमा रूपमा यो विशेषता अपूरो हुनेछ। यो मोडेल को आवास - यो एक कठिन मामला हो, वेल्डेड हतियार प्लेट को छ। यहाँ नाक भाग प्रबन्ध गर्दै छन्, पक्ष फिड, तल, पर्खाल र मोटर को वेंटिलेशन र शक्ति पैक को छत।
Frontal पाना - मोटाई जो एक पहनने प्रतिरोधी कोटिंग प्रदान इस्पात र फाइबर सिसा, एक multilayer बाधा समग्र। शरीर को पक्ष बीचमा भाग मा सुरक्षा स्ट्रिप्स द्वारा पूरक छन्, ठाडो हतियार प्लेट द्वारा बलियो छन्। आफ्नो उद्देश्य - को बाडे को आन्तरिक मात्रा वृद्धि र आफ्नो टावर स्थापना गर्न। यस पक्षलाई सम्पूर्ण परिधि को स्टेरिड़ मा माउन्ट जुन वेल्डेड कोष्ठक छन्।
टी-72 - संसारभरि आदर प्रेरित गर्ने एक लोकप्रिय सोभियत ट्यांक। यसको आवास खुवाउन हतियार प्लेट कडी हो। सुरक्षा माउन्ट प्रशंसक अलमल्ल पार्नु रूपमा। यो सुसज्जित एक हटाउन सकिने अगाडि र पक्ष प्लेट एक volute छ। हावा को प्रवाह आयोजना - आवास एक शीतलन प्रशंसक र विभाजन को मुख्य उद्देश्य छ। ट्यांक को पक्ष3मिमी को एक मोटाई भएको एक स्कर्ट संग पूरक र एल्यूमीनियम मिश्र धातु को गरे। धूलो flaps को पक्ष तिनीहरूलाई पूर्व-लोड - कठिन भू-भाग ड्राइभिङ गर्दा ट्यांक को राज्य सुरक्षित गर्न, स्क्रीन को stowed स्थिति मा राखिएको गर्न सकिन्छ। जब एक टी-72 युद्धमा, धूलो ढाल 60 डिग्री को एक कोण मा अगाडी तैनाथ गर्न सकिन्छ।
कसरी टावर गर्छ?
यो आकार कास्टिंग हतियार इस्पात सिर्जना गर्न प्रयोग, यो आधार पाइप-दृष्टि rangefinder रक्षा जो छत को शीर्ष र टाउको गर्न वेल्डेड छ। पर्खाल मोटाई wherein भिन्न भिन्न अखंड संरचना टावर। चाप गाला, को खोल को बुकिंग लागि महत्त्वपूर्ण छन् जो - सामने भाग जहाँ बन्दूक स्थापित छ एक जहाजको भ्क्याल, छेउमा सतह संग सुसज्जित छ।
समाक्षीय मेशिन गन छ जो एक embrasures लागि बन्दूक को सही प्रदान गर्दछ। बन्दूक कोष्ठ, wherein एक ट्यूब संग संयोजन मा illuminator माउन्ट छ रात दृष्टि, बन्दूक बिजुली actuator गर्न खुवाउनुभयो छ जो मार्फत बाँकी छ। छत प्वाल बायाँ आधा जहाँ गनर स्थित एक आधार, छ। टावर हाइड्रोलिक र मार्गदर्शन संयन्त्र घुमाउँदा। यो सबै सुविधा Armored वाहन को लड गुणहरू बारेमा निष्कर्षमा पुग्न गर्न अनुमति दिन्छ जो टी-72 ट्यांक, distinguishes।
सुसज्जित एक smoothbore बन्दूक डी-81TM संग turret, यो अर्को बन्दूक संग जोडीएको छ, र तिनीहरूले दुई विमानहरु निर्देशन अटल छन्। को केसिङ स्लिभ, को breech संयन्त्र र निस्तब्धता जोडिएको छ एक ट्यूब - बन्दूक को ब्यारेल। उहाँले, बारी मा, छ नलिका हुन्छन्। बन्दूक सटर सञ्चालनको फरक अर्धस्वचालित मोड। ट्यांक को गोलीबारी दायरा निम्नानुसार टी-72 छ:
जब हतियार-भेदी projectiles फायर र सञ्चितिको दूरी छ 4000 मिटर;
उच्च-विस्फोटक गोले प्रयोग गर्दा यसको मूल्य 5000 मिटर पुग्छ;
राति जब शूटिंग यो 800 मिटर बराबर छ;
गोले एक पार्श्व स्तर उच्च विस्फोटक गोले प्रयोग गरि निकाल गर्दा, सीमा फायर 9400 मिटर पुग्न सक्दैन।
यसलाई उल्लेख पर्छ भनेर प्रति मिनेट 8 राउंड्स विभिन्न लडाई बन्दूक गोलीबारी दर को स्वचालित शुल्क लिने, को मार्गदर्शन चार्ज संग को लागि - प्रति मिनेट 1-2 शट।
टी-72 को गोलीबारी दायरा त्रिविम monocular सुसज्जित भिजुअल क्षेत्र थप स्वतन्त्र स्थिरीकरण संग दृष्टि-rangefinder प्रदान गरिएको छ। 3-5 प्रतिशत शुद्धता संग दायरा 1000-4000 मिटर मा मापन दृष्टि लक्ष्य दूरी प्रयोग गरेर। को गोलीबारी राति सञ्चालन गरिएको छ भने, एक प्रकाश विशेष रात दृष्टि को आईआर फिल्टर आधारमा।
कमान्डर गरेको टावर विरोधी विमान बन्दुक, जो हावा र जमीन लक्ष्य तपाईं गोली गर्न अनुमति दिन्छ संग सुसज्जित छ। टी-72 TTX ट्यांक को निम्न को मामला मा: distal हावा लक्ष्य गोलीबारी मा जमीन 1500 मिटर दूरी मा सञ्चालन गरिएको छ मा - 2000 मिटर antiaircraft ट्यांक स्थापना समावेश सम्म :.
मेशिन गन एनएसवी 12.7 मिमि;
recoil उपकरण संग पालने;
विरोधी विमान दृष्टि;
, तेर्सो र ठाडो प्रत्यक्ष साधन अनुमति ह्यान्डल;
गोले लागि दोकान;
एक सबै समय को सबै भन्दा शक्तिशाली Armored लडिरहेका रूसी को - टि-72। युद्घ सामांग्री निम्न राउंड्स मान्छ:
automaton AKMS 7.62 मिमी;
10 हात grenades।
ट्यांक दुई-विमान stabilizer हतियार Electrohydraulic, जो एक अप्टिकल दृष्टि-rangefinder संग संयुक्त छ छ। यो जटिल को मुख्य उद्देश्य हो:
स्वचालित रूपमा ट्यांक को आन्दोलन अवधिमा केही स्थितिमा बन्दूक र मेशिन गन राख्नुहोस्।
एक स्थिर बन्दूक Inducing र बन्दूक सजिलै गति निर्देशन समायोजन।
तेर्सो विमान मा unstabilized बन्दूक खाई।
को गनर गर्न ट्यांक कमान्डर को लक्षित सिर्जना गर्नुहोस्।
आपतकालीन ड्राइभर को टावर घुमाउन।
stabilizer प्रदान वेग कोणीय, स्वचालित मोड मा एक ठाडो बन्दूक द्वारा गराइएको छ जो संग। बन्दूक लागि 39 शट लागि बारूद को 2000 राउंड्स - ट्यांक बारूद को भाग मा मिसिन बन्दूक pkt, मिसिन लागि बारूद को 300 राउंड्स, संकेत पेस्तोल लागि 12 कारतूस र विरोधी विमान मेशिन गन लागि बारूद को 300 राउंड्स।
मा टी-72 स्वतः बन्दूक शुल्क जो विद्युत एक दायरा, छ। यो संयन्त्र कैसेट, चटाई हटाउने संयन्त्र लोड छड, dynamoelectric डाट बन्दूक, स्मृति र नियन्त्रण एकाइ उठाने, एक घुमाउँदा वाहक हुन्छन्।
सोभियत संघ युद्धमा ट्यांक सुसज्जित मिसिन फ्रेम मा माउन्ट र वितरण संयन्त्र फीता Windows, को डाट र हात ड्राइव बन्द, एक फ्रेम, एक विद्युत actuator आवरण समावेश भएको एक घुमाउँदा वाहक संग। फ्रेम 22 कैसेट राखिएको मा, त्यो एक ठोस वेल्डेड निर्माण हो। टेप वेल्डेड छ र दुई पाइप शट विभिन्न प्रकारका समायोजित गर्न आवश्यक छ।
पावर प्लान्ट को सुविधाहरू
उपकरण ट्यांक टी-72 एक परिमार्जन powerplant उपस्थिति सुझाव। यो 780 अश्वशक्ति, तरल ठंडा प्रणाली र ड्राइव अपकेंद्र supercharger संग पूरक छ जो संग एक डिजेल इन्जिन छ। इन्जिन वजन यो एक शक्ति स्टेशन स्थापित छ, 980 किलो छ। बहु-इन्धन इन्जिन डिजेल, पेट्रोल र स्ट्रोक विभिन्न ब्रान्डहरु मा चल्न सक्छ। तर मुख्य इन्धन - डिजेल। ट्यांक इन्जिन शक्ति4इनडोर र5आउटडोर इन्धन ट्यांकी को comprised छ।
को सफा हावा इन्जिन को सिलेंडर प्रवेश जो रक्षा गर्न, ट्यांक थप धूलो कलेक्टर देखि धूलो हटाउँदछ एक दुई चरण हावा क्लीनर संग सुसज्जित छ। शुद्धीकरण धेरै चक्र मा गरिन्छ, र त्यसपछि हावा इन्जिन प्रवेश 99,8 प्रतिशत purified।
टि-72 को उपकरण स्नेहक र ठंडा सिस्टम को उपस्थिति सुझाव। को स्नेहन सिस्टम परिसंचारी छ र संयुक्त र ठंडा सिस्टम - तरल र छाप, यो बाध्य परिसंचरण द्वारा पूरक छ। विशेष ताप प्रणाली इन्जिन warms र लन्च अघि यसको प्रणाली राख्छ।
ट्यांक टी-72 गितार र दुई प्रसारण सहित एक हाइड्रोलिक नियन्त्रण संग एक मार्गदर्शन प्रसारण संग सुसज्जित। गिटार एक गियर reducer प्रसारण गर्न टोक पहुंचाता कि भनिन्छ।
चेसिस र उपकरण
एक द्विपक्षीय छ rubberized रोलर्स र तीन Uni-दिशात्मक रोलर, पछिल्लो ड्राइभ पाङ्ग्रा व्यवस्था, एक सनकी संयन्त्र स्टेरिड़ - टी-72 को कम्ब्याट वजन 44.5 टन को हवाई जहाज को पहिये गर्दा हो। ट्यांक एक व्यक्ति छ torsion निलम्बन, र हाइड्रोलिक शक र छ समर्थन रोलर्स बढ्छ जो। लार्वा जुत्ता 97 therein संख्या संग सानो एकाइहरु छ।
ट्यांक मा थप उपकरणहरू को उल्लेख गर्न सकिन्छ, र रेडियो सञ्चार उपकरण, चार सदस्यताका लागि डिजाइन। रेडियो स्टेशन अप गर्न 20 मी को संचार दायरा प्रदान, एक ट्रान्सीवर र मोबाइल फोन रूपमा संचालित। 1261 सञ्चालन आवृत्ति मा संचालित को ट्रान्सीवर, संकेत प्रसारण र स्वागत एक साधारण आवृत्ति सञ्चालन छन्।
टि-72 को वजन प्रभावशाली थियो भन्ने तथ्यलाई बावजुद, यो संग ठूलो विनाशको Armored वाहन हतियार सुरक्षित थप प्रणाली सुसज्जित थियो। प्रणाली गर्दा विषाक्त एजेन्ट वा जैविक हतियार उजागर गर्ने चालक दल को सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, ट्यांक र आघात लहर, विकिरण एक आणविक विस्फोट देखि देखि यसको आन्तरिक उपकरण रक्षा गर्न सक्छन्।
विस्फोट सुरक्षा विस्तृत हतियार, साथै उच्च गुणस्तरीय छाप बाहिर। भित्र ट्यांक, एक विशेष विश्वसनीय सामाग्री, को लड खण्ड र चालक खण्ड संग सुरक्षित छाप छ। सुरक्षा प्रणाली एक प्रकाश र ध्वनि अलार्म रूपमा कार्य गर्दछ, र ट्यांक दबाव र बाहिर तत्संबंधी विषाक्त पदार्थ को उपस्थिति भित्र अतिरेक को विकिरण स्तर नियन्त्रण गर्दछ।
आगो बुझाने प्रणाली extinguishant भरिएका छन् जो तीन-लीटर कन्टेनर र पनि जो सिलिन्डरहरु र शाखा, र नौ तापमान सेन्सर जडान तीन पाइपलाइन छ। पटक-पटक कार्य को एक विशेष प्रणाली धूम्रपान देखि एक विश्वसनीय सुरक्षा रूपमा सेवा गर्दैछन्। यसलाई डिजेल इन्धन मा चल्छ।
अतिरिक्त उपकरण ट्यांक को टी-72 उल्लेख हुन सक्छ जो5मिटर को पानी गहिराई र माथि 1000 मा पु एक चौडाई मा अवरोध हटाउन अनुमति दिन्छ पानी ड्राइभिङ लागि प्रणाली। यो उपकरणको संरचना पनि सबै चालक दल सदस्य लागि डिजाइन lifejackets मास्क समावेश छ।
संशोधन, ट्यांक टी-72
: जारी ट्यांक सबै वर्ष आठ आधारभूत मोडेल मा भएको थियो टी-72, टी-72M र टी-72M1, टी-72C र आफ्नो प्रजातिहरू। साथै, उहाँले सक्रिय यस्तो चेकोस्लोवाकिया, पोल्याण्ड, पूर्व जर्मनी, हंगेरी र बुल्गेरिया रूपमा देशहरूमा विदेश बेचिएको छ। अल्जेरिया, भियतनाम, लिबिया, म्यासेडोनिया, किर्गिस्तान, र धेरै अरु - 2007 को रूपमा, यी Armored वाहन देशहरूको संख्या सेवामा थिए। ट्यांक टी-72 ईन्जिनियरिङ्, विशेष र सैन्य वाहन को एक ठूलो संख्या को लागि एक आधार धेरै देशहरूमा व्यापक प्रयोग भएको थियो।
टी-72 - लामो मात्र होइन सोभियत संघ तर पनि संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली र विश्वसनीय को एक मानिन्छ गरिएको छ कि यूराल ट्यांक छ। को स्तरवृद्धि संस्करण अझै पनि लगातार नियन्त्रण प्रणाली र शक्ति उपकरण सुधार गर्दा, धेरै देशहरूमा उत्पादन गरिएको छ।
विश्वव्यापी जहाज अदृश्य - corvette "रखवाली"
नदी माछा को स्लाव भाषाहरु नुस्खा सूप
भोल्टेज कनवर्टर 12V- 220V कार: समीक्षा। एक भोल्टेज कनवर्टर कसरी चयन गर्ने?
"पुल Burning": phraseological उदाहरण को मूल्य, व्याख्या
डुङ्गा को उत्पादन फाइबर सिसा बनेको
को ट्रयापिज wipers के हो?
छोराछोरीको दाँत को चाँदी-चढाना: समीक्षा, फोटो
कोकोआको क्यालोरी सामग्री। दूतावासको कोओको क्यालोरी सामग्री के हो भन्ने पत्ता लगाउनुहोस्
ट्यूबल बाँझोपन: कारणहरू र उपचार
कर अख्तियारको कोड। निवास स्थान मा कर अख्तियारको कोड